यूएईको दुबई राज्यमा जान सजिलो लागू भयो यस्तो नियम !
काठमाण्डौ : संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईको दुबई राज्यमा जान अब को’रोना भाइरस वि’रुद्धको खोप लगाएको प्रमाण नचाहिने भएको छ ।
नेपाल, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्काबाट दुबई आउनेले यूएई सरकारले तोकेका अन्य स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु परे पनि को’रोना वि’रुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र भने पेस गर्नु नपर्ने यूएईको स्थानीय सञ्चार माध्यमले खबर लेखेका छन् ।
तर यो नियम यूएईको अन्य राज्यमा भने लागू हुने छैन ।
को’रोना वि’रुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र आवश्यक नभए पनि यूएई जाने नेपालीले सबैभन्दा पहिला त यूएईको सम्बन्धित निकायमा अनलाइनबाटै यूएई प्रवेशका लागि अनुमति लिनुपर्छ । ४८ घण्टा भित्रको पी’सीआर नेगे’टिभ रिपो’र्ट हुनुपर्नेछ ।
नेपालको विमानस्थलमा र्‍या’पिड पीसीआर परीक्ष’ण गरेको हुनुपर्नेछ भने यूएईको विमानस्थलमा अवतरण भए पछि पनि पी’सीआर परी’क्षण गर्नुपर्छ ।
क्व’रेण्टीन लगायतका यूएई सरकारले तोकेको अन्य स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । तर नेपालबाट जाने यात्रुको विमानस्थलमा र्‍या’पिड पीसी’आर परीक्ष’णको व्यवस्था नहुँदा दुबई
उड्न विमानस्थल पुगेका यात्रुसमेत फर्किएका छन् । यूएई जाने जहाज रित्तै गएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले र्‍या’पिड पीसी’आर परीक्षणको व्यवस्था नभएसम्म यूएई जाने यात्रु नलैजाने बताएको छ ।
२०७८ श्रावण २८, बिहीबार ०१:०८ गते 1 Minute 897 Views
अचानक साउदी अरेबियाका विदेश मन्त्री भाेलि नेपाल आउँदै !
साउदीमा १४५ नेपालीको बिचल्ली, उद्दारका लागि उठेनन हातहरु !